December 2021 - ပညာ ပါဝါ
Too Far | 30/12/2021
လိုအပ်လိုဖြစ်စေ ပိုနေလို့ဖြစ်စေ… ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီး ငွေလဲ ငွေထုတ်လုပ်သူများ အလိမ်မခံရစေရန် သိထားသင့်သည်များ.. ငွေလဲငွေထုတ်လုပ်သူများအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလှသည့်စာ ဖြစ်သောကြောင့် အောက်ဆုံးအထိဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်.. ငွေပေးမည့်ငွေရှင်သည် ငွေထုတ်မည့်သူရှိသည့်နေရာသို့ ပိုက်ဆံသွားပို့သည့်အခါ လမ်းမှာလုယူခြင်းများ၊ အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းများ၊ ပွဲစားကြားခံအ ရှုပ်တော်ပုံများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်.. ငွေပေးမည့် ငွေရှင်ဘက်ကနေ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုရင်.. ငွေထုတ်မည့်သူ၏ Mobile banking ထဲမှာ ငွေ ရှိ မရှိ
လူမနေတဲ့ အိမ်ကို မီတာခ (၅) သောင်းကျော်ကျတယ် ဆိုပြီး မီတာမဖတ်ပဲ ယူနစ် ၅၀၀ ကျော် ပိုကောက်တဲ့ ကိစ္စ ….
လူမနေတဲ့ အိမ်ကို မီတာခ (၅) သောင်းကျော်ကျတယ် ဆိုပြီး မီတာမဖတ်ပဲ ယူနစ် ၅၀၀ ကျော် ပိုကောက်တဲ့ ကိစ္စ …. လူမနေတဲ့ အိမ်ကို မီတာခ (၅) သောင်းကျော်ကျတယ် ဆိုပြီး မီတာမဖတ်ပဲ ယူနစ် ၅၀၀ ကျော် ပိုကောက်တဲ့ ကိစ္စ ရန်ကုန် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးမရသေးတဲ့ ဒေသတွေအတွက် အလွန်သင့်တော်သော ငွေအကုန်ကျသက်သာပြီး လျှပ်စစ်မီး မလိုဘဲ အလင်းရောင်ရစေတဲ့ မီးသီး.. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ နေရာတချို့တွေမှာ လျှပ်စစ်မီးကို လုံလောက်စွာ မရရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် လျှပ်စစ်မလိုဘဲ အခကြေးငွေသက်သာပြီး လူတိုင်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ မိုဆာ (Moser) လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝ မီးသီးလေးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ မိုဆာ မီးသီးကိုတော့ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ က စက်ပြင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့
မဟာရန်ကုန် မြို့တော်ကြီးရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြလိုက်တဲ့ စာတပုဒ်….. ( ရန်ကုန်ဆိုတာ မြို့ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ တောကြီး (သို့) အစစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အတုမြို ကြီးပါ )
မဟာရန်ကုန် မြို့တော်ကြီးရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖော်ပြလိုက်တဲ့ စာတပုဒ်….. ( ရန်ကုန်ဆိုတာ မြို့ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ တောကြီး (သို့) အစစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အတုမြို ကြီးပါ ) ရန်ကုန်မှာ ရနိူင်တာဆိုလို့ အတုတွေပဲရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတာကြာလာတာနဲ့အမျှ .. သတိထားမိတာတစ်ခုက .. ရန်ကုန်မှာ အတုတွေပဲရတယ်ဆိုတာပါပဲ .. ရန်ကုန်ကို စ,ရောက်လာပြီး နှစ်လသုံးလလောက်နေတော့ ..
မြန်မာပြည်က အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးတွေ မဖြစ်မနေ ပြင်ရမယ့် အချက် (၅) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် –
မြန်မာပြည်က အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးတွေ မဖြစ်မနေ ပြင်ရမယ့် အချက် (၅) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် – (၁) ရှင်းပြတာကို နားမထောင်ခြင်း ဒါကတော့ တော်တော်များများလဲ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှင်းပြတာကို နားထောင်လိုက်မှ တကယ့်အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို သိပြီး အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ပဲ ကိုယ်ထင်ရာပြောနေရင်တော့ စေတနာတွေက ဝေဒနာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆရာမလေး စုစုစံ ထုတ်ပြောလာတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က မြန်မာပြည်ကို အအေးလှိုင်း ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းသတင်းတွေအကြောင်း…. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အအေးလှိုင်းဖြတ်မည်ဟုဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလအထိ အအေးလှိုင်း (cold wave) မရှိဘဲ ပုံမှန်ရာသီဥတုမျိုးသာ ရှိမယ်လို့ မိုးလေဝသပညာရှင်မလေး စုစုစံက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ “၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်ရာသီဥတုကိုသာရရှိနိုင်ပါတယ်။ အအေးလှိုင်း
မဖြေတဲ့သူနဲ့ ဆုံးတဲ့သူပဲ မအောင်မယ့် စကစရဲ့ ၃ လပြတ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ (သို့မဟုတ် ) ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအား၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စတင် စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၂ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို မတ်လ ၃၁ ရက်ကနေစပြီး ဧပြီလ
မတ်လ ၂၇ရက်နေ့က ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာသီဟတင်ထွန်းအတွက် မိခင်ဖြစ်သူ၏ ၉လပြည့် ရင်ကွဲအလွမ်း 😢 ( “သားဆီသို့” ) “သားဆီသို့” သို့/ချစ်လှစွာသောသား အမေတို့မတွေ့ရတာဒီနေ့ဆို၉လကြာခဲ့ပြီနော်။ အမေတို့ကသားကိုလွမ်းနည်းပေါင်းစုံနဲ့လွမ်းနေကြပါတယ်။ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ပေါ့သားရယ်။ မင်းအမေကြီးကသတိရတိုင်း၊မင်းရှိနေသလိုပဲစကားတွေပြောတယ်။မင်းကြားမှာပါနော်၊သား။ မင်းအဘွားကလည်းမင်းနာမည်ကိုခေါ်ပြီးနေ့တိုင်းအမျှပေးဝေခဲ့တယ်။အခုတော့အဘွားမရှိရှာတော့ဘူးသားရယ်။ မင်းအဒေါ်တွေနဲ့မင်းဦးလေးကသားအတွက်ရည်စူး၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးနေကြတယ်။ မင်းရဲ့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ၊မင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကသတိရလွမ်းဆွတ်နေကြပါတယ်။ သားရေ ၊မင်းမရှိတဲ့နောက်မှာ ဆိုးရွားလှတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ထပ်ခါထပ်ခါကြုံတွေ့နေရလို့အမေ့မှာနှလုံးရောဂါဖြစ်နေပြီသားရယ်။ အမေ့ရောဂါကအသစ်အဆန်းသားရဲ့။အသည်းကြွပ်ဆတ်မာကျောတဲ့ရောဂါလိုပဲ နှလုံးကြွပ်ဆတ်မာကျောတဲ့ရောဂါလေ။ အမေ့နှလုံးသားကနူးညံ့ပျော့ပျောင်းမလာပဲပိုပြီးမာကျောတင်းကျပ်သွားတာကြောင့်သွေးလှည့်ပတ်မှုမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်။ ဘယ်ကုထုံးနဲ့များကုရမလဲကွယ်။အမေ့သားရှိနေသေးရင်တော့ ဆရာကျော်ရေ
ဒီအချိန်မှာ မီတာမဆောင်ရရင် မနေနိုင်သူတဦး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြွေးတောင်းတာ အကျင့်ပါနေတဲ့ အီးပီစီ အကြောင်း
Too Far | 28/12/2021
ဒီအချိန်မှာ မီတာမဆောင်ရရင် မနေနိုင်သူတဦး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြွေးတောင်းတာ အကျင့်ပါနေတဲ့ အီးပီစီ အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်- အီးပီစီ ကို တော်တော် တင်းလာပြီ အိမ်ကို မီတာစာရွက် လာမပေးလို့ အဲ့နားရောက်တုန်းလေး ၃ လစာ တာဝန်သိသိ မီတာဆောင်လာတယ်၊ ကဲ နောက် ၂ ရက်ကျ မီတာစာရွက် ၃ ရွက်
အခြေခံလူတန်းစားတွေ သက်သာဖို့ ကြက်ဥ ၃ လုံး ကို ၂၀၀ ကျပ် အစီအစဉ် လေးအကြောင်းတစေ့တစောင်း…….. ရန်ကုန် ဒဂုံအရှေ့ ၇/၈ ဂိတ်ဟောင်းလမ်းဆုံ၊ ငထွေးရူးလမ်းမကြီး သူထက်စံ မုန်ဟင်းခါးဆိုင် နေရာမှာ မနေ့က ညနေက စတင် ရောင်းချပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အ‌ခြေခံလူတန်းစားတွေ သက်သာချောင်ချိရေး ဖြစ်စေဖို့ ကြက်ဥ (၃)